နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce ၏လယ်ယာထွက်ကုန်များ Life and health products Herbal health products | Hou ယန်တန်အရာရှိတဦးက
Hou ယန် Tong Mall က
yan တန် Hou ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု ~ Skype ကို: yanhoutang
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုက်ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များ、များအသုံးပြုမှု、ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှု [email protected]
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Consulting စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုရှာဖွေရေး panel က、လက်ဖက်လက်ကား、သည်အခြားစီးပွားရေးန်ဆောင်မှုများ [email protected]
အရောင်း Affiliate E-commerce ဂိမ်းပုံစံ ~、ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်、ဆဲလ်ဖုန်းဖြန့်ဖြူး [email protected]
Store ကို Affiliate
လျှပ်စစ်မီးပံ့ပိုးပေး join ဖို့
join ဖို့ micro-channel ဖြန့်ဖြူး
WeChat Mall က
Taobao Mall က
Lynx Mall က
Jingdong Mall က
အင်္ဂလိပ်ဘူတာ – ဒေါ်လာ
တရုတ်ဘူတာရုံ - စွက်ဖက်
ဂျပန် Grand Prix – ဂျပန်ယန်း
ဂျာမန်ဘူတာရုံ – ယူရို
ရုရှားဘူတာရုံ – ရူဘယ်
Hou ယန် Tong ကလက်ဖက်ရည် Co. , မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
ထိုင်ဝမ်ရဲ့တောင်များ Native စပါးစိုက်ပျိုးချိန်
ထိုင်ဝမ်ဒဏ်ငွေလက်ဖက်ရည်，လက်ရာမြောက်သောသစ်သားဆုလက်ဆောင်သေတ္တာနှင့်အတူ coupled，သင့်ရဲ့ထူးခြားတဲ့စတိုင်လက်ဆောင်တွေ Create
Wish List ကို
လက်ဖက်အိတ်အပန်းဖြေအထုပ် oolong အပူပိုင်းအသီးအပွ
ပစ္စည်းအပြည့်အဝ，အဆင်ပြေခံနိုင်ရည်ရေမြှုပ်，စိတ်အားထက်သန်မှုအသီးအရသာ၏ရီးရဲလ်ဖြန့်ကျက် -、နာနတ်ပင်、လိမ္မော်သီး、Apple ကအနံ့，နာနတ်သီးဇာတိပကတိအ join နှင့်ပန်းပွင့သောစပျစ်နွယ်ပင်ဆွဲထုတ်，oolong လက်ဖက်ရည်ထုတ်ကုန်သုံးပြီးကစော်ဖောက်ခြင်း，သဘာဝကပျားရည်ထုတ်လုပ်ရန်，ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလက်ဖက်ရည်ခံစားမျိုးစုံမြည်းစမ်းသာလျှင်သိ。
ကြွေထည်လက်ဖက်ခြောက်၊ လက်ဖက်ခြောက်အစုံပါ ၀ င်သောလက်ဖက်ခြောက်လက်ဖက်ခြောက်လက်ဖက်ခြောက်လက်ဖက်ခြောက်လက်ကိုင်ဂျပန်လက်ပတ်ကျသောဂျပန်စတိုင်လ်
ထိုင်ဝမ် Alishan လက်ဖက်ရည်မြင့်တောင်ကြီးလက်ဖက်ရည် Oolong Tea Organic Tea
14 သြဂုတ်လ 2020 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
26 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2020 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
02 နိုဝင်ဘာလ 2018 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
အမေဇုံရွေးချယ်မှုရဲ့အကြံပြု ~ Ya ရဖို့ထိုင်ဝမ်လက်ဖက်ရည် !!
19 ဇွန်လ 2018 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
02 ဇွန်လ 2018 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
19 ဒီဇင်ဘာလ 2017 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှု - ပစ်မှတ်ထားလူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်မျက်နှာဖုံးအခမဲ့လှူဒါန်းမှု
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့စစ်ဆင်ရေးဝန်ထမ်းများလက်ထောက်ကော်မရှင်နာအမေဇုံ eBay Aliexpress Wish Shopee ဒါရိုက်တာယောဘသည်
04 စက်တင်ဘာလ 2019 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
03 စက်တင်ဘာလ 2019 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
စုဆောင်းမှုညွှန်ကြားရေးမှူးတာဝန်ခံ Copywriting အယ်ဒီတာအဖွဲ့န်ထမ်းလက်ထောက်ကော်မရှင်နာ
ကုန်သွယ်ရေးစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုပေးသွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Manager ကိုလက်ထောက်ကော်မရှင်နာဒါရိုက်တာယောဘ၏တာဝန်ခံကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဝန်ထမ်းများ
စုဆောင်းမှုညွှန်ကြားရေးမှူးတာဝန်ခံ SEO ဆိုသည်မှာ SEM Marketing ကိုအထူးကုရှာဖွေရေးအင်ဂျင် keyword ကို optimization လက်ထောက်ကော်မရှင်နာ
Yanhoutang ဇီဝနည်းပညာ Co. , Ltd. (Group)
ထိုင်ဝမ်：မဟုတ်ဘူး. 63, Yuping 4th စိန့်
ထိုင်ဝမ် - R.O.C ။
ဟောင်ကောင်：ဆိုင် T18, 3/F ကို Cathay ပစိဖိတ်ဒေသ
88 Mall No.125 WanChai RD
Longhua ခရိုင် Minzhi လမ်း
Xiangnan ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအဆောက်အအုံ 210
သြစတြီးယား：Industriezeile 35/3 စတော့အိတ်
4021, Linz , သြစတြီးယား
အကြံပြု eBay Aliexpress Jian Beacon ဆုတောင်း ပရိုမိုးရှင်း Hou ယန်တန် ဝေမျှမယ်ဘဝ အလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများ ကြှနျုပျတို့ကို Join Amazon အလုပ်အကိုင်များ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ခြင်း net ကနီ WeChat Mall က ပေမယ့လှုပ်ရှားမှုများ အီလက်ထရောနစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပလက်ဖောင်း FDA က Lazada n95 မျက်နှာဖုံးများ YanHouTang အွန်လိုင်း Mall က ကိုယ်စားလှယ် သဘာဝလက်ဖက်ခြောက် တောင်ကြီးတောင်လက်ဖက်ရည် dhgate Hou ယန် Tong Mall က ပရိုမိုးရှင်း အလုပ် ်ထမ်းခေါ်ယူမှု
© 2016 ~ 2020 - Yanhoutang ဇီဝနည်းပညာ Co. , Ltd. မှမူပိုင်ခွင့်။ | ယူ ICP အမှတ် 16045018
သင့်အနေဖြင့်မိတ်ဖက်က်ဘ်ဆိုက်များရဲ့ login အကောင့်ကိုသုံးနိုင်သည်:
အပိုဒ်အုပ်စုများ Category: Select လုပ်ပါပရိုမိုးရှင်းအသိပေးစာအကြံပြုလက်ဖက်ရည်နှင့်အသက်အရွယ်အုပ်စုများ်ထမ်းခေါ်ယူမှုကို MessageHou ယန်တန်လက်ဖက်ဝေမျှမယ်ဘဝနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးသက်တမ်းကျန်းမာရေးအရည်အသွေးလက်ဖက်ရည်လက်ဖက်ရည်နိဒါန်းလက်ဖက်ရည်အကျိုးသက်ရောက်မှုလက်ဖက်ရည်ပုံပြင်လက်ဖက်ရည်ပေမယ့ဝေမျှမယ်ပျော်စရာလက်ဖက်ရည်ကနျြးမာရေးကုထုံး
တရုတ်ဆီဖြည့ refueling အတူတကွခုခံ Saris ဝတ္ထု coronavirus အဆုတ်ရောင်ကပ်ရောဂါဝူဟန်
N95 မျက်နှာဖုံးများမျက်နှာဖုံးများမဆိုကွဲပြားခြားနားသောမျက်နှာဖုံးများစွန့်ခွာဖို့တစ်ခါသုံးဆေးဘက်တန်း-Level စောင့်ရှောက်မှု
nikiYIng အပေါ် အကြီးတန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ – အကယ်စင်စစ်ကဗျာကို
Hou ယန်တန် အပေါ် အကြီးတန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ – အကယ်စင်စစ်ကဗျာကို
YoYo အပေါ် ရှန်ကျန်းအချိန်သည်ဆောင်းကာလ - သင်ဆဲတက်ကြွ Are
YoYo အပေါ် သငျသညျအတူတူအခြားကွာရှင်းမှုကိစ္စဖြစ်လာမခံပါနဲ့ - Ma Rong နှင့်ဝမ် Baoqiang
ရှငျဘုရငျဆရာ ..... အပေါ် သငျသညျအတူတူအခြားကွာရှင်းမှုကိစ္စဖြစ်လာမခံပါနဲ့ - Ma Rong နှင့်ဝမ် Baoqiang
လက်ဖက်အိတ်အပန်းဖြေအထုပ် oolong အပူပိုင်းအသီးအပွ ¥38.00 – ¥350.00
Hou Tong ယန်စိုးရိမ်ပူပန်မှု Micro-ရုပ်သံလိုင်းအများပြည်သူအရေအတွက်ကို